Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2018 August 08
Tantara tamin'ny 08 Aogositra 2018
Shina: Ny Zo Tsy Hatahotra
Shina08 Aogositra 2018
Tsy voatery hiankina amina herisetra ny fampitahorana. Ampy ny fampitomboana fotsiny ny sandan'ny fikatsahana ny fitsaràna. Ary koa, tsy dia ilaina akory aza izany. Raha vao mazava fotsiny fa azo ampiana ny vesatr'io sarany io na rahoviana na rahoviana, ampy izany handresena lahatra antsika tsy hetsika.
Azia Atsimo08 Aogositra 2018
Fivavahana08 Aogositra 2018
Voces Bolivianas: manaparitaka ny teny Aymara ao amin'ny Aterineto ny tetikasa Jaqi Aru
Mampiasa ny fiteny Aymara, fitenin'ny Tompotany any Amerika Atsimo ny mponina roa tapitrisa mahery ao Bolivia, ary nihena tsikelikely ny mpampiasa azy noho ny fiteny Espaniola sy ny Quechua nandritra ny taonjato farany. Ny tetikasa Voces Bolivianas izay tohanan'ny Rising Voices dia nanohana ny fananganana ny vondrom-piarahamonina virtoaly Jaqi Aru,
Antsafa08 Aogositra 2018